कस्सिएला कि चुँडिएला नेकपाको ‘एकताको डोरी’ ? « Bikas Times
कस्सिएला कि चुँडिएला नेकपाको ‘एकताको डोरी’ ?
पौडेल र पोखरेलसँगको भेटमा उल्टै चेतावनीयुक्त जवाफ पाएका दाहालले ओलीसम्म सन्देश पुर्याउन नेम्वाङलाई चुने
नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने एक जना नेता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले शुक्रबार बिहानै एउटा ट्विट गरे । उनको ट्विटको आशय थियो, पार्टी विवाद मिलाउन दोश्रो पुस्ता सक्रिय हुनु पर्यो ।
उनले ट्विटरमा लेखे– नेकपाका दोश्रो पुस्ता (शंकर, जनार्दन, प्रदीप, टोपबहादुर, योगेश, सुरेन्द्र, विष्णुहरु)ले निकटताको पहिचान बोकेर बिभाजित टुकडीको कम्पनी कमाण्डरमा चित्त बुझाउने कि विशाल पार्टीमा सार्थक सैद्धान्तिक, बैचारिक, सांगठनिक हस्तक्षेपद्वारा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने? अब समयले परीक्षण माग्यो ।
ठाडो शैली र खरो मिजासका नेताको परिचय बनाएका बास्कोटा ७० करोडको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यति सक्रिय छैनन् । त्यही कारण हुँदा खाँदाका सञ्चारमन्त्री पद गुमाए बास्कोटाले । तर, उनीप्रति ओलीको विश्वासमा भने कमी आएको छैन । उनी आफ्नै शैलीमा बोल्छन् तर, भावना ओलीको ।
नेकपामा ओली पक्ष अब अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा छ । सचिवालय बैठकमा ओलीले जुन कुरा राख्दै दश दिनको समय मागे, अहिले ओली पक्षीय नेताहरु त्यस्तै भाषा समेत प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
बास्कोटाले भने जस्तो दोश्रो पुस्ताका नेताहरु त शुक्रबार खासै सक्रिय देखिएनन्, बरु अध्यक्ष दाहाल, संसदीय दलका उपनेता एवम् ओली पक्षीय नेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल भने दिनभर जसो धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा व्यस्त रहे ।
मध्यान्ह लगत्तै धुम्बाराही कार्यालय पुगेका अध्यक्ष दाहालले पौडेल, नेम्वाङ र पोखरेललाई पालैपालो बोलाए, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विवाद समाधानका उपायबारे छलफल गरे ।
तर, दाहालले शुक्रबार छलफल गरेका तीनै जना नेताले समाधानको नयाँ सूत्र सुझाएनन्, यसअघि दाहालले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएर गतिरोध अन्त्यका लागि आग्रह गरे । सुरुमा भेटिएका पौडेलले परिस्थिति अति गम्भीर रहेको भन्दै बल दाहालकै कोटमा रहेको तर्क गरे । महासचिव पौडेलसँग दाहालले जुन सल्लाहको अपेक्षा गरेका थिए, पूरा हुन सकेन ।
दाहालले जतिबेला पौडेलसँग छलफल गरिरहेका थिए, ठीक त्यति नै बेला उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पार्टी कार्यालयकै अर्को कोठामा पार्टीका विभिन्न नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका थिए । पछिल्लो समय दाहालप्रति अति नै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका पोखरेलले दाहालसँगको भेटपछि त्यस्तै आक्रोश व्यक्त गरे । पोखरेलको भाषा केही दिनअघिको सचिवालय बैठकमा ओलीले राखेको भाषासँग मिल्दोजुल्दो थियो ।
दाहालसँगको भेटपछि उनले भने, यति धेरै आरोप लागेका छन्, लगाउनेले एक एक गरी पुष्टि गर्नुपर्छ, अन्यथा आरोप लगाउनेले वास्तविकता बुझ्नुपर्ने अवस्था आउँछ । उनले अब बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध लागेका एक एक आरोपको बुँदासहित जवाफ आउने जानकारी दिए ।
पौडेल र पोखरेलसँगको भेटमा उल्टै चेतावनीयुक्त जवाफ पाएका दाहालले ओलीसम्म सन्देश पुर्याउन पूर्वसभामुख एवम् संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङलाई चुने । अन्य नेताहरुसँगको तुलनामा नेम्वाङसँग अलि बढी समय भलाकुसारी गरेका दाहालले नेम्वाङमार्फत ओलीलाई सन्देश पठाए, पार्टी एकताको डोरी चुँडिएको छैन, म एकताकै पक्षमा छु ।
नेम्वाङका अनुसार, दुई नेताहरुबीच एकताको डोरी कसिलो बनाउने उपायका बारेमा छलफल भएको छ । यसअघिको स्थायी समितिको बैठकले गरेका निर्णयमा हामी अडिन सक्यौं भने एकतामा कुनै समस्या पर्ने छैन, दाहालसँगको छलफलबारे नेम्वाङले भने, उहाँ (दाहाल) पनि एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ ।
अघिल्लो चुनावताका पारिएको पार्टी एकताको गाँठो पछिल्लो समय धोल्लिएको छ । यसलाई थप कसिलो बनाउने वा पूरै खुस्काउने भन्ने विषय अब क्रमिक रुपमा बस्ने सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकले मात्रै निक्र्यौल गर्नेछ ।